PassbeeMedia: Iyo Inonzwisisika Yemafoni Coupon, Wallet uye Kuvimbika Platform | Martech Zone
China, July 17, 2014 Chitatu, July 16, 2014 Douglas Karr
PassbeeMedia inobvumira vashandisi kugadzira uye nekuparadzira nhare-yakagadzirira Apple Passbook, Google uye Samsung Wallet zvemunharaunda zvinopihwa, madhiri, uye makuponi kune vatengi pasirese neyakareruka, yekuzvishandira yega chikuva chinosvika kune vatengi kwavari online uye pane yavo nhare mbozha.
Nepo mamwe mafoni ekushambadzira mapuratifomu achipa mashoma maficha, PassbeeMedia ine yakazara suite yemafoni ekushambadzira maturusi - anosanganisira QR kodhi coupons, mameseji, matikiti edhijitari, madhijitari wallets, iBeacon, zvirongwa zvekuvimbika uye makadhi, akapfupisa ma URL, uye kunyangwe chirongwa che whitelabel chemasangano.
Ungatanga Sei nePassbeeMedia
Sarudza imwe yezvirongwa zvina zvemitengo yakazara zvinonyatsoenderana nebhizinesi rako. Kubva pamabhizinesi ega ega uye madiki, kumabhizimusi ari pakati nepakati kana kunyange makambani makuru.
Gadzira Chipo Chako - sarudza kubva kune edu ehunyanzvi akafanogadzirirwa matemplate ekugadzirisa mushandirapamwe wako. Kana kana iwe ukagadzira dhizaini iwe yaungade kushandisa zvakare, unogona kuichengeta sematemplate matsva.
Govera & Musika - Sunga iro rakazara simba reSocial Media Mapuratifomu, SMS uye Email kuti ubatanidzane nevose vako vanogona vatengi
Tevera zvaunopa yemitambo, chidimbu chevashandisi uye mashandiro epuratifomu uchishandisa PassbeeMedia's analytic dashboard.
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Passbeemedia!
Tags: apple passbookmatikiti edhijitaridijitar walletchikwama cheGoogleibeaconmaponi emunomadhiri emunozvemunharaunda zvinopihwamakadhi ekuvimbikapurogiramu yokuvimbikamafoni couponsnhare yekushambadzira nharepassbeemediaqr makodhi couponsmubairo chirongwasamsung chikwamadzakapfupiswa urlsSMSmamesejiwhitelable nhare